Kedu otu esi echekwa ọganihu m na SEO ma ọ bụrụ na ngalaba mgbanwe?
Mkpebi a kpụworo nke ọma iji gbanwee ngalaba aha bụ nnukwu, n'ezie. Mana ị na-atụle usoro okwu na-agbanyeghị aka na nsogbu ego nke na-amalite n'ụzọ zuru ezu iji weghachite mgbake, ọtụtụ n'ime anyị pụrụ inwe nkụda mmụọ.
Otu n'ime ihe ndị kachasị anya na-eme maka SEO mgbe a gbanwere mpaghara mgbanwe, ọ bụ oge nkwụsị nke azụmahịa. A na-atụkarị ụdị mmebi ahụ na 5-20% ma na-atụ anya maka okporo ụzọ weebụ, ma ọ dịkarịa ala site n'oge mbụ ruo izu 3-4 ka bọtịnụ ndị na-agbagharị na Google na-achọkarị iji mụọ URL ọhụrụ, redirects, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mmelite. Nke mbụ, nwee obi iru ala, dị ka oge a ga-abụrịrị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ gị. N'ụzọ dị otú ahụ, ana m akwado itinye aka maka mgbasa ozi PPC a na-eche maka aha aha gị, tinyere akwụkwọ ndị ọzọ na-abụghị ndị a chọrọ maka ọchụchọ.
N'ikpeazụ, òkè ọdụm nke webmasters na ndị na-emepe weebụ ga-amalite na-ewere ihe ga-abụ mgbe usoro ọgwụgwọ gasịrị, na-amalite mgbake ozugbo SEO ha gbanwere ọrụ ngalaba ka esiteworị. Ma i nwere ike ime nke a. Echere m na ị nwere ike ịga maka ọrụ mbụ ị na-eme ike gị niile iji nyere Google aka, ya na ndị ọzọ search engines, nweta nghọta nke ọma banyere ihe ga-eme ma mezie ya nke ọma. Ya mere, ị nwere ike ịnọgide na-enwe ọganihu na SEO na-agbanwe mpaghara mgbanwe na nchịkọta niile dị ya gburugburu n'ime usoro nkwụsị. M na-atụ aro ka ị na-eche onwe gị dịka onye isi, naanị site n'ịgbaso usoro ihe ndị a:
Ịwube njikọ gị dị na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ dị elu bụ ihe dị mma. Mgbe ị na-arụsi ọrụ ike na imelite ma na-ewughachi njikọ gị dị ugbu a na Ịntanetị, nweere onwe gị ịkọwa mkpa ọ dị ịgbanwe mpaghara dịka ụfọdụ nnukwu ohere ọhụrụ. Echere m na ị nwere ike iwepụtakwu ihe nkwado ọhụrụ site na izu ndị na-esonụ mgbanwe mpaghara. Ime otú ahụ, ị ​​ga-ezigara ndị Google ọbụna akara ndị ọzọ dị irè na nke bara uru. Na nke ahụ ka a ga-enye ọkwá dị elu na SERPs mgbe niile.
Echefula ịlaghachi n'ihi na azụlinks ochie gị reworked na URL ọhụrụ. Isi echiche a bụ iji nwetaghachi njigide zuru oke nke nkwado backlinks ka ị na-ebelata redirect count na ngalaba n'otu oge ahụ. Na-aga, na-egwu na Ịntanetị site na iji ngwá ọrụ pụrụ iche (M na-adabere na ahrefs), chọpụta akara azụ gị na ikike kachasị ike. Ozugbo ha dị, jide n'aka na ị na-eme ihe mgbaru ọsọ site n'iji email mee ka ị nweta mmelite maka ha niile.
N'ikpeazụ, echefula ịmepụta nkwalite maka aha ngalaba ọhụrụ gị site na channelụ mgbasa ozi mmadụ. N'ụzọ dị otú ahụ, malite site na ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị na URL na aha aha ahia (ma ọ bụrụ na ọdabara) na ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu na nke yiri ya. Ọzọkwa, ọ ga-abụ ihe dị mma ịkwusa mgbanwe mpaghara maka ihe omume na ụfọdụ n'ime usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Nke ahụ ga - enyere gị aka ịme ka ndị na - ege ntị mara na naanị ngalaba gị ga - agbanwe, mana ụkpụrụ dị elu nke ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị niile ga - adịkwa otu Source .